IPhone 6s misy efijery 5-inch sy Full HD? | Vaovao IPhone
IPhone 6s misy efijery 5-inch sy Full HD? Aza manonofy azy noho ireo antony ireo
Betsaka ny zavatra voalaza momba ny a fanamafisana ny efijery azo atao amin'ny iPhone 6s, na i Juan namako naharihary antony maro maninona Apple no tokony hanao ny hitsambikina ho 5 santimetatra sy ny vahaolana Full HD. Izy ireo dia tena mitombina sy antony voajanahary, na izany aza, tsy manonofy momba izany.
Na dia misy aza ny tsaho momba ny iPhone 6s an'ny dimy santimetatra, ity no fotoana voalohany nanapahan'ny Apple azy planning mahazatra ary manapa-kevitra ny hanova ny fisehoan'ny iPhone amin'ny kinova «s». Ny fanararaotana ny volavolan'ny taon-dasa dia zavatra efa nahazatra antsika ary izany dia ny taranaka faharoa dia "mitovy kokoa, saingy tsara kokoa".
Mino tanteraka izany aho tsy hahita iPhone 6s 5-inch isika fa amin'ny resaka famahana dia manana ahiahy aho. Full HD dia fenitry ny indostria ary androany, tsy misy dikany ny mampiasa fanapahan-kevitra toa ireo hita amin'ny iPhone 6.
Ny antony tokana mahatonga ahy hieritreritra fa tsy hanome ny vahaolana amin'ny iPhone 1080s 6P i Apple dia raha manao izany fanovana izany izy ireo ny iPhone 6s Plus dia ho ratsy kokoa amin'ny lafiny teknika raha ny momba ilay zandrilahy kely (hakitroky ny pixel isaky ny santimetatra) ary mety hampihena ny varotra maodely miampy (zavatra efa nitranga tamin'ny iPad Mini ary noho izany, ny iPad Mini 3 dia tsy mieritreritra ny fanavaozana ny iPad. Mini 2, afa-tsy ny Touch ID).
Ireo mpanamboatra kojakoja fitaovana koa dia manana ny feony mihira. Isan-taona dia mitodika any amin'ny Apple izy ireo satria marika iray izay ankoatry ny fivarotana be dia be ny endriny ary mitahiry ny vidin'ny famokarana. Ny fanaovana lasitra ary mitazona azy mandritra ny taona maro dia mora kokoa noho ny manova azy isan-taona.
Mazava ho azy fa raha nisy iPhone 6s nivoaka tamin'ny endrika hafa na nisy fiovana kely dia tsy misy safidy hafa afa-tsy ny mampifanaraka fa Apple dia niavaka ho marika marin-toerana tokoa amin'ity lafiny ity. Firy taona ny famolavolana ny MacBook Air? Hafiriana no naharetan'ny MacBook Pro talohan'ny nahatongavan'ireo modely Retina Display). Tsy maintsy tazonina ny endrika tsara, tsy noho ny adidy, fa satria tsy mitovy taona ary tsy mila fanerena hanova azy.
Mba hamaranana ary ity dia efa an'ny tena manokana, Apple dia tokony hifantoka manaova fantsom-pifandraisana mora kokoa. Ny sisiny ambony sy ambany dia manomboka mandray ny habeny amin'ny haben'ny efijery 4,7-inch sy 5,5-inch. Manantena aho Corning miaraka amin'ny Apple patanty hampidirina Touch ID eo amin'ny efijery, ndao isika hanao veloma farany ny bokotra Home ho an'ny 2016.
Raha fintinina, raha miandry hahita iPhone 6s misy efijery 5-inch ianao, aza mahazo illusion be loatra satria raha misintona ny tranomboky amin'ny gazety isika dia lazain'ny tantara amintsika fa tsy azo inoana izany.
Inona ny hevitrao? Heverinao ve fa handefa iPhone 6s i Apple miaraka amin'ny efijery diagonal lehibe kokoa sa hitazona ny 4,7 santimetatra ankehitriny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6s » IPhone 6s misy efijery 5-inch sy Full HD? Aza manonofy azy noho ireo antony ireo
iray amin'ireo antony mandeha haingana be ny iphone noho ny ankamaroan'ny android satria tsy mahazaka sary ao anaty rafitra ...
asio efijery 2k na 4k…. Ho hitanao ny zava-mitranga.
Raha maharitra in-3 ny batterie ankehitriny, miaraka amin'ny écran toa izany dia ho faty amin'ny fihomehezana.
Eny, tsy marina tanteraka izany. Ny iPhone 6 Plus dia mandika amina vahaolana eo ambonin'ny Full HD ary avy eo manova ny habeny amin'ny 1080p ka amin'ny haavon'ny GPU, manome interface tsara ny interface iOS. Ary mitandrema, afa-tsy amin'ny lalao, ny kisary mifindra mankany amin'ny fullHD na 2k dia tsy mampisy fahasamihafana amin'ny zava-bitan'ny biby koa.
Any izahay dia manana ny laharana PS4 amin'ireo lalao ao amin'ny 1080p ary hangataka finday izahay hamindra azy ireo amin'ny 2k na 4k, very tanteraka ny avaratra.
Alberto ramirez dia hoy izy:
Aza adino ry zalahy, kely kokoa noho izany, ny paoma dia afaka nanaporofo izany hatrany.
Valiny tamin'i Alberto Ramirez
Ny iPhone 6s dia hampiasa ny sary mihetsika an'ny Apple Watch
Zavamaniry vs. Zombies 2 dia miverina amin'ny fotoana mety ary miverina amin'ny taona 80